Muraayadaha duufaanta: waxa ay tahay, waxa loogu talagalay iyo sida aad u saadaalin karto cimilada | Shabakadda Saadaasha Hawada
Jarmal Portillo | 11/11/2021 10:01 | Kala bixid
Bini'aadamku wuxuu waligiis rabay inuu ogaado sida loo saadaaliyo cimilada. Waxa jira hal-abuuro badan oo la sameeyay si loo saadaaliyo. Mid ka mid ah waa Muraayadaha duufaanka. Waxa kale oo loo yaqaan crystal duufaan waana qalab cajiib ah oo loo isticmaalo in lagu saadaaliyo cimilada. Inkasta oo kaliya laga yaqaan taageerayaasha saadaasha hawada, X waxaa horey u isticmaali jiray navigators qarnigii XNUMXaad.
Maqaalkani waxa aanu kuugu sheegi doonaa waxa uu yahay Storm Glass, waxa ay yihiin sifooyinka iyo sida loo isticmaalo.
1 Waa maxay Storm Glass
2 Sideed u saadaalin kartaa cimilada?
3 Hal-abuuraha muraayada duufaanka
4 Saadaasha iyo dhaqanka
5 Sida loo sameeyo muraayada duufaanka
Waa maxay Storm Glass
Qalabkan xiisaha leh ayaa ah weel quraarad ah oo daboolan oo ay ka buuxaan cabitaanno kala duwan oo isku jira, dareerayaashan ayaa leh qaabab kala duwan iyadoo ku xiran xaaladaha cimilada waxayna saadaalin karaan cimilada waqti gaaban. Qaybaha ugu muhiimsan ee isku dhafkan waa biyo nadiif ah iyo ethanol. Waxa kale oo ku jira xaddi yar oo ah nitrate potassium, ammonium chloride, iyo camphor. Waa inaad ka taxadartaa habka isku dhafka ah, sababtoo ah haddii wax lagu daro hab kale, way qarxisaa.
Sideed u saadaalin kartaa cimilada?
Isbeddelka heerkulka hawada iyo cadaadiska atmospheric waxay keeni karaan isbeddel ku yimaada milanka isku-dhafka ah, taas oo keeni karta isbeddel ku yimaada muuqaalka dareeraha. Turbidity ka weyn ama ka yar oo uu aasaasay Fitzroy ama joogitaanka ama maqnaanshaha miisaanka, crystallites ama qaababka fiilo waxay isbedeshaa wakhti ka dib saacadaha soo socda. Dareere saafi ah oo aan wasakh lahayn, waa calaamad muujinaysa cirka buluuga ah iyo deegaanka qorraxdu ka jirto, haddii uu daruuro bilaabona waxa uu isu beddelayaa daruur oo roob baa laga yaabaa.
Haddii dhibco yaryar ay ka soo baxaan dareeraha, ceeryaamo ama ceeryaamo ayaa la filan karaa, halka barafka, uu iman karo (cimilo wanaagsan) in ay jiri doonaan cad yar oo baadad u eg oo mararka qaarkood samaysa baraf. Haddii kiristaalo isku mid ah ay ka muuqdaan dareeraha daruuraha leh halkii dareere saafi ah, markaa waxaan la kulmi doonaa onkod ama onkod. Fasiraadda saxda ah ee qaababkan waxay u oggolaan doontaa in xaaladaha cimilada la saadaaliyo 24 ilaa 48 saacadood ka hor.
Hal-abuuraha muraayada duufaanka
Ka sokow alifaha muraayadda duufaanka, Fritz roy sidoo kale waa shaqsi muhiim u ah horumarinta saadaasha hawada. Sida ay oggolaadeen Ururka Royal, shabakad ka kooban 24 xarumo cimilo ayaa la hirgeliyay si loogu diro macluumaadka London iyada oo loo marayo telegram. Markii uu bilaabay safarkiisii ​​​​labaad ee Beagle, FitzRoy waxa uu soo xidhay barometer-ka aan la tirin karin iyo 22 saacadood oo xiddigiyayaal ah si uu u habeeyo xisaabaadka ulka la heli karo.
Wuxuu sameeyay khariidado cimilo si uu u sawiro wajiyada hore ee jawiga iyo dhaqdhaqaaqooda. Laakiin dareenkiisa dhabta ah ayaa saadaaliyay cimilada, aaminsan in ay badbaadin karto nolosha. Sidan ayuu ku qanciyey tafatirayaasha wargeyska London ka soo baxa ee The Times inay ku daraan warbixinnada cimilada daabacaadadooda. Sidaa darteed, Ogosto 1, 1861, qaybta ugu horreysa ee saadaasha hawada ee taariikhda ayaa la daabacay.
Saadaasha iyo dhaqanka
Sababtoo ah isbeddelka muuqaalka isku-dhafka ah sababtoo ah isbeddelka jawiga, muraayadda ayaa noo ogolaanaysa inaan samayno saadaasha cimilada ee degaanka, muddada gaaban. Tusaale ahaan, haddii cimiladu ay noqoto mid deggan, qalalan oo qorrax leh, muraayaddu waxay u muuqataa mid ka nadiif ah wasakh iyo nadiif. Haddii ay daruuro noqoto, waxay calaamad u tahay daruuro iyo roobab suurtagal ah. Haddii ay jiraan dhibco yaryar gudaha dareeraha, waxaa jiri kara ceeryaamo ama ceeryaamo.
Maalin cad, haddii aad bilowdo inaad aragto baalal cad oo yaryar oo u eg baalal baraf ah, waxay u badan tahay in Cimiladu way xumaataa oo aakhirka wuu baraf doonaa. Dhammaadka, haddii kiristaalo isku mid ah ay u muuqdaan dareerayaal daruuro leh halkii ay ka ahaan lahaayeen kuwo hufan, waa calaamad cad oo duufaan - sidaas awgeed magaca Storm Glass.
Sida loo sameeyo muraayada duufaanka
Si aad u samayso galaas duufaan ah, waa inaad si sax ah u miisaantaa milixda iyo kafur, oo aad cabbirtaa mugga khamriga iyo biyaha. Markaad miisaamayso, waxaad isticmaali kartaa miisaanka dahabka ee Shiinaha oo sax ah 0.01 G. Waxaad isticmaali kartaa dhululubo qalinjabisay ama tuubo cabbir ah si aad u cabbirto mugga, ama waxaad miisaami kartaa dareeraha iyadoo lagu saleynayo cufnaanta.
Isla markiiba waxaad ku dari kartaa kafur weelka loo diyaariyey Qalabka oo ku dar khamriga, ama waxaad ku milmi kartaa 2/3 ee mugga khamriga la xisaabiyay, Ku wareeji xalka weelka galaaska duufaanka oo ku raaci khamriga haray. Ka dib milixda ku mil biyaha, ku dar xalalka milixda ee ka soo baxa xalka kafur oo si siman u walaaq (waxaad xidhi kartaa gufka oo aad rogi kartaa ama ruxin kartaa dhowr jeer). Waa in ay jiraan xoogaa hawo ah oo u dhexeeya xalka iyo hoose. Xaaladdan oo kale, kafurku wuxuu ku dhici doonaa qaabka qulqulka cad, taas oo muujinaysa hagaajinta dhaqdhaqaaqa.
Kadibna qalabka ku xidh dabool si ay dhammaan goobooyinka hawadu u sabbeeyaan u fur in muddo ah si ay u barbar dhigaan cadaadiska, xir oo mari daboolka, ka dibna ka soo saar ilaa qabow. Muraayada hore ee la dhammeeyey waa in lagu hagaajiyaa si toosan oo madow madow oo la dhigo meel aan ka fogeyn daaqadda, laakiin ka fog nidaamka kuleylka iyo qalabka kale ee kuleylka. Qiyaastii hal usbuuc ka dib, kafurka ayaa soo qulquli doona waxaana soo bixi doona kiristaalo kala duwan.
Waxaad inta badan ka heli kartaa soo jeedino ama khaladaad khaldan ama xitaa waxyeello leh. Waxaan tixi doonaa qaar ka mid ah:
Suurtagal maaha in muraayadda duufaanka lagu daboolo caag-joojin. taas oo si lama huraan ah u keeni doonta in isku darku huruud isu rogo, iyo inta wakhtigu dheer yahay, midabku wuu dheregsan yahay.
Kadibna ku xidh qalabka fur, U ogolow dhammaan xumboyadu inay sabeeyaan, fur daqiiqad si aad u barbar dhigto cadaadiska, xidho oo mari daboolka, ka saar qabow.
Muraayada duufaanka ee dhammaatay waa in lagu hagaajiyaa meel toosan oo ku taal sool madow oo matte ah oo la dhigaa meel aan ka fogeyn daaqadda, laakiin ka fog nidaamka kuleylka iyo qalabka kale ee kuleylka. Qiyaastii hal toddobaad ka dib, kafurka ayaa is ururin doona oo kiristaalo kala duwan ayaa soo bixi doona.
Way ku habboon tahay in weelka lagu xidho isku dar ah, haddii aysan suurtagal ahayn in la xidho, waxaad isticmaali kartaa muraayadda dhulka oo aan saliid lahayn, ama fluoroplastic / polyethylene stopper, joojintu waa inay dammaanad qaaddaa cidhiidhiga buuxda ee weelka, way ku habboon tahay in ugu dambeyntii lagu hagaajiyo resin epoxy, adoo isticmaalaya marxaladda dhumucda sare ee furka.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto muraayadda duufaanka iyo sifooyinkiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Kala bixid » Muraayadaha duufaanka